प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीको रायसमेत सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी मंगलबारका लागि पेसी तोकेको छ । सुनुवाइ सकिएपछि इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहसनोट पेस गर्न दुई दिन समय तोकेका छन् ।
जापानका प्रधानमन्त्रीले आगामी आमनिर्वाचनका लागि यहाँको संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। यहाँका अधिकारीहरुले बिहीबार बसेको संसदको बैठकलगत्तै संसद विघटन भएको जानकारी दिएका हुन्। यहाँ आगामी अक्टोबर ३१ मा संसदीय...
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सही रहेको दाबी गरे । ‘संसद् विघटन सही थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि विघटनको निर्णय बाध्यकारी थियो । पार्टीलाई घेराबन्दी गरेर पार्टीको अध्यक्ष...
नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म छ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् । तीमध्ये चार पटकका विघटन बदर र दुई पटकका सदर भएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा तीनपटक सर्वाेच्च अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । पहिलोपटक विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । विसं २०५१ …
प्रधानमन्त्रीको दाबी– प्रतिनिधिसभा विघटन स्वतः र स्वभाविक हो
काठमाडौं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते दिएको आदेश बमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दाबी गरेका छन्।अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्माणका धारा ७६का सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको उल्लेख गरेका हुन्।उनले विघटन संवैधानिक रुपमा स्वतःभएको भन्दै आफूले राष्ट्रपतिसमक्ष विघटनको सिफारिस गरेर संवैधानिक जिम्मेवारी मात्र पूरा गरेको बताएका छन।
मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन
काठमाडौं / मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुनेछ । त्यसअघि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । The post मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन appeared first on Purbeli News.
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मत दिए प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदले ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न लागेको हल्ला फैलिएको भन्द्यै प्रश्न उठाएपछि ओलीले आफूलाई मत दिए संसद फेरि विघटन नहुने बताएका हुन् । उनले आफूलाई ५ वर्षकै म्यान्डेट जनताले दिएको र त्यही कारण राजीनामा नदिएको पनि बताए । ‘संसद विघटन होला कि भन्ने फेरि चिन्ता छ, ए बाबा मत दिम, कसरी विघटन हुन्छ ? आफू मत नदिइ नदिइकन विघटनतिर धकेल्ने, अनि अर्कालाई अवजस लगाउने
फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ओलीको आयो यस्तो जवाफ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । शनिबारको विशेष अन्तरवार्ताका क्रममा बाहिर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन र अर्ली इलेक्सनमा देश जान्छ भन्ने बाहिर चर्चा छ , जनताले कसरी बुझ्दा ठीक होला ? भन्ने लोकान्तरका प्रधान सम्पादक विमल गौतमको प्रश्नमा ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन मेरो शोख होइन । मैलै पहिले पनि भनेँ मेरो बाध्यताले विघटन गरेको थिएँ । अब पनि मेरो कुनै शोख छैन । यदि संविधानले धकेलेर त्यहीँ पुर्यो भने म गरौं के ? संविधानले मलाई एउटा स्मुथ बाटो जे दिएको थियो त्यो संवैधानि...
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निष्कर्षसहित तेस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेको छ ।पार्टीले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निर्णय गरे पनि पार्टीका नेतापिच्छे नै फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । संसद् विघटनविरुद्धको संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी नहुने अडान लिएको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलापछि थप रणनीति तय गर्न
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान संशोधनकै प्रयास : बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रयास गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान संशोधनको अवस्थामा पुर्‍याएको जिकिर गरे। धारा ७६ (७) का आधारमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने…